Kuratidzwa Kwakavanzika Himachal | Dana @ + 91-993.702.7574 Kuti Uite.
Kuratidzwa Kuvanzwa Himachal
Chikamu chekunakisa kwepanyama, Himachal Pradesh ndoroto dzese dzinofamba. Kutaridzira Kuvanzwa Himachal kuchakupa imwezve chiitiko chese nzvimbo yakanaka iyi. Vakakomborerwa nemhando dzakasiyana-siyana dzemakomo makuru, kugurusa nzizi, kusagadziriswa miti uye masango ane miti yakasvibira, nyika yakanaka iyi yeIndia hapana mubvunzo inofarira hupenyu hwevamwe vanoita zvekuchiva, vatenzi, vanofarira zvikara, vafambisi vezvikara uye vanowanzoita zvezororo zvakafanana. Tora zvisikwa zvinofamba uchifamba nemasango akapoteredza, kuenda kunzvimbo dzinofadza zvinosvibisa, kudzika kunze kana kuvhara parwizi rwuri kutora Tour To Hidden Himachal. Zvingave kuti mhuri yakarambidzwa yezororo, rudo rworudo kana kuti kungotiza kubva paupenyu hwako hutsinye, Himachal Pradesh inzvimbo inopa nyika yemikana kune vose vanofamba. Kutora Kuratidzwa Kuvanzwa Himachal iwe uchawana pfuma yepasi-yakaongororwa minda yakasvibiswa pakati pemakomo yakavezwa mumasango emakomo. Hazvishamisi kuti hurumende iri kune vakawanda vanofamba mabhakiti mazita! Iwe unogona kuenda kuburikidza nerwendo uwane pfungwa pfupi pamusoro peKutanga Kuvanzwa Himachal.
06 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 255
ZUVA 01: CHANDIGARH - SHIMLA (125 KM / 04 HRS)
ZUVA 02: SHIMLA - SANGLA (230 KM / 08 - 09 HRS)
Dharira ku Sangla kuburikidza nemiti yakakura yeFofri, Fagu, Narkanda uye pamwe neRwizi Sutlej kuti uuye manheru uye uone ku Luxury Luxury. Fara manheru manzvimbo dzakanaka dziri mumupata weBaspa pahupamhi hwe 9000 ft. Ichi ndicho chimwe chezvikomo zvakanakisisa muHimalaya uye kazhinji inofananidzwa nemugwa unozivikanwa weKashmir. Ichizivikanwa neChinnauri chikafu chemichero nemichero yemichero yemapuro, uyu mupata wakazarurirwa vashanyi chete mu1993 nekuda kwepedyo pedyo nemuganhu weTibetan. Usiku huno paHotel.
ZUVA 03: SANGLA - CHHITKUL - SANGLA (40 KM / 03 HRS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemafuro, fungai nzvimbo dzakapoteredza pamwe neyekare kare Kamru Fort & temberi yakatsaurirwa kuna Mwarikadzikadzi Kamakhya Devi uyo akauyiswa kubva kuAsam & Nages Mwari. Kudya kwemasikati, kuenda kuKitkul - musha wokupedzisira wekare Old Indo - Tibetan Trade Route. Famba kuburikidza nemiti yemichero yemavara uye brilliant stream. Dzokera ku Sangla Kudya neOvernight kugara.
ZUVA 04: SANGLA - KAPLA (49 KM / 04 HRS) - 2670 MTRS
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, tarisa kubva kuhotera & kuendesa kuKalpa - Chigaro cheKunharaunda yeKinnar & kamwe mudiwa weDain Dalhousie. Svika Kalpa & Tarisa muhotera yako. Kalpa aizivikanwa seChin shure mumazuva apo yaiva Regional Capital. Kalpa yakachinja zvishoma mumakore ekupedzisira e500. Zvinonzi apo & apo Ishe Dalhousie aida kutora purogiramu yake yakazara muShimmla, aizouya pano paHondo rake. Rimwe nerimwe nekona imwe neimwe yeKalpa inotarisana neJorkanden neKinner Kailash Peaks, inofananidzwa seimwe yemisha yemitambo yaIshe Shiva & parutivi rwayo ndeye 79 dombo rekugadzira dombo rakafanana neShivlinga iro rinoshandura ruvara sezuva rinopfuura uye rinoonekwa kune ziso rakashama pazuva rakajeka. Ita mapepa ezororo muhotera & manheru manyokera kuBuddhist Gompa - Hu Bu Lan Kar. Kudya & Overnight kugara.
Mangwanani-ngwanani anofara kubuda kweKinner Kailash Peaks mushure mekudya kwekudya. Kalpa inozivikanwa neAples & Chilgoza Plantations yayo (rudzi rweDry Fruit), iyo inowanikwa muIrish neTurkey kunze kweiyi pano. Muti uyu ndeweMhuri yePine uye chibereko chiri mukati pe inch long long cover. Kushanyira kuSchool & Narayan Nagini Temple Complex, iyo ine Shrines yeHindu, Buddhist & Local Deities. Itai kuti mushure mekufamba kwemazuva masikati mufambire kuRhihi Village kuti muongorore hupenyu hwe "Pahari". Shandisai nevanogara. Dzokera kuKalpa. Kudya uye kugara kweusiku.
ZUVA 06: KALPA - SARAHAN - SHIMLA (260 KM / 10 HRS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya mangwanani uende kubva kuhotera uye uende kuShimma uchienda kuShanani. Usiku huno paHotel.
ZUVA 07: SHIMLA - CHANDIGARH (125 KM / 04 HRS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemachingwa uende kubva kuhotera uende kuChandigarh. Drop pa Chandigarh Airport / Railway Station.